Tilmaam dhammeystiran oo loogu talagalay u soo guurista Dubai City, Caawinta Expat ee UAE 🥇
Published by Shirkadda Dubai City at October 30, 2017
Tilmaam dhammaystiran oo loogu talagalay u guurida Dubai
Tilmaam dhammaystiran oo loogu talagalay u soo guurista Dubai. Ugu badnaan la sameeyay ee loogu talagalay dadka shaqo doonka ee caalamiga ah. Maxaad run ahaanti kartaa ka filan Dubai? Waxaa jira waxyaabo yar yar oo aad sameyn karto ka hor intaadan xitaa u soo dhaqaaqin Imaaraadka Carabta Emirates. Caasimad kastaa waxay leedahay Waxyeelo iyo xumo. Gaar ahaan haddii ay timaado Bariga Dhexe. Tusaale ahaan, waa inaad aqrisaa a tilmaan faahfaahsan oo ku saabsan sida loo helo shaqo Dubai. Dhinaca kale, hubso inaad haysato lacag ku filan iyo dhiiranaan si ay nolol cusub uga bilawdo Bariga Dhexe.
Waxaan ku siineynaa hage dhameystiran oo loogu talagalay u guurista Dubai. U guurida wadan cusub waa shaqo xiiso leh oo murugo leh. Isla mar ahaantaana inta badan dadka ajnebiga ah waxay qaataan tallaabadan si ay u helaan shaqo iyada oo aan lahayn aqoon haboon ama wax ku ool ah oo ku saabsan sida wax waliba u degaan. Ma yahay meesha ugu fiican ee dalxiisayaasha ka imaanaya dhammaan aduunka oo dhan.
Waxaa xusuus mudan in ka badan 80% of Dubai deganayaasha waa waxay la hadlaan dadka ku nool iyo ka shaqeynta magaalada. Taasi waxay timid magaalada iyada oo aan lahayn macluumaad sax ah oo ku saabsan waxa loo baahan yahay in la qabto. 70%% Shaqooyinka ka shaqeeyaa Dubai ayaa isticmaala WhatsApp. Taasina waa sababta loogu talagalay ka hor intaan la qorsheynin ka hor inta aysan u guurin Dubai. Si aad u ogaato dhammaan wixii loo baahnaa oo loo baahan yahay macluumaadka ku saabsan sida wax loo qabto iyo siyaabaha ugu fiican ee loo qaban karo. Halkan waxaan ku soo bandhigaynaa a hagid dhamaystiran waayo, u guurista Dubai.
Qiimaha Nolosha ee Dubai
Tilmaam dhammaystiran oo loogu talagalay in aad u guurto Dubai waa adiga?
Inkastoo Dubai ay bixiso jawi aan canshuur lahayn, laakiin kharashka ku nool magaalada wuxuu heli karaa qiimo yar. Sidaa awgeed, haddii aad shaqo raadinayso Dubai si aad u bilowdo a mustaqbalkiisa markaa, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in mushaarkaagu dabooli doono kharashka nolosha aasaasiga ah. Aagga Dubai waxaa loo yaqaanaa magaalada ugu qaalisan inay ku noolaadaan Imaaraadka Carabta.
Kharashka ku nool magaalada Dubai labada xaaladba. Had iyo jeer ku dar guryaha iyo sidoo kale dukaamada cuntada leh oo ku yaal meel ka baxsan magaalada. Ku raaxeyso xoogaa madadaalo si aad u hesho madadaalo iyo isqoritaankaaga kids iskuulada. Waxaa intaa dheer adeegsiga, gaadiid wata caymiska baabuurta. Dhammaantood waxay ku yimaadaan hal markii aad adigu u soo guurista Dubai sida safaaradda Hindiya.
Waa inaad ogaataa in qiimaha kirada sanadlaha ah ee qolka studio ay gaarto 62,000 AED. Waa inaad hubsataa habka lagu helo guri kiro ah, gaar ahaan Dubai. Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan kharashka ijaarka ee Emirates. Wax kasta oo loo arko, waa in la sameeyaa markaad guureysid qoyskaaga. Goorma dadka u soo guuray Dubai waa in la ogaadaa in kharashyada dheeraadka ah ee aan kaliya laga saari karin marka ay ku nool yihiin Dubai. Sida lahaanshaha ama kireysiga gaariga, iibsanaya alaabta elektarooniga ah, ka soo qaadashada dugsiyada ugu fiican carruurtaada. Xitaa dugsiyada ugu fiican ayaa furan cusub Dubai Campus sanadka soo socda.
Kharashka ku noolaanshaha Dubai, waad ogaan doontaa markaad halkaas ka hesho sida Hindiya. Guud ahaan, waa aad qaali u ah in lagu noolaado Dubai. Xaqiiqda dhabta ah, ilaa 2020 soo bandhigto qiimaha kor u kici doona samada. Mashruucyo cusub oo imanaya Dubai. Iyo wax kale musharixiinta raadinaya shaqo ku jira Imaaraadka Carabta. Ka hor intaadan u guurin hannaan faahfaahsan faahfaahinta iyo qiimaha aasaasiga ah kharashka ku nool magaalada Dubai.
Furitaanka koontada bangiga ee Dubai ama Abu Dhabi waxay ku xiran tahay meesha aad u guurto waa mid aad u fudud. Xaaladaas, shuruudaha qaar ayaa u baahan inay galaan meel, waxa oo dhan waxay kuxirantahay bangiga. Si aad u furato xisaab bangi caadi ah, waxaad u baahan tahay inaad noqo qof deggan Dubai. Laakiin muddo dheer, bangiyada qaar ayaa u oggolaanaya waxay dadka degaan u dirtaa in la furo xisaabaadka keydinta. Laakiin kiiskaas Tababaraha kooxda dejinta xaddiga hadhaagga ugu yar ee ay tahay in la sameeyo. Waxaad u baahan doontaa inaad keento dukumiinti loo baahan yahay sida Baasaboorka dukumeentiga degganaanshaha, asalka iyo sidoo kale koobi. Iyo mararka qaarkood warqad ka socota loo-shaqeeyahaaga. Marka laga hadlayo, ma jirto wax diidmo ah oo ka socda dawladda Imaaraadka Carabta.
Daryeelaha qaybta Bangiga ee Dubai. Dhanka kale, helitaanka adag. Ku dhowaadba shaqo raadiye maqal ku saabsan a Xirfadda Maaliyadda ee Dubai. Gaar ahaan, ku saabsan hay'adaha maaliyadeed ee sii kordhaya si dhakhso ah. Laakiin ma aha xirfadle kasta oo sameeynaya habkan noloshiisa. Tusaale ahaan qaar ka mid ah shirkadaha xirfadlayaasha ah sida Bangiga Dubai oo shaqo ka jaray ee United Arab Emirates. Xaaladahaas oo kale, waa inaad ogaataa in xirfad aad ku qaadato Dubai maaliyadeed maaliyadeed maalin kasta.
Tusaale ahaan inaad waraysiga ka qaadatid maamulaha bangiga. Waxaad u baahan doontaa inaad Shahaadada MBA si aad shaqo uga hesho Dubai. Dhinaca dhinaca wanaagsan, marwalba waxaad bilaabi kartaa xirfaddaada qaar ka mid ah jagooyinka aasaasiga ah. Tusaale ahaan sida caawiye wax iibsanaya ama kaash. Dhinaca xun, haddii aanad haysan khibrad kugu filan bangiga.
Shaqaalaha cusub ee shaqo doonka ah lama shaqaalayn doono sida ugu dhakhsaha badan markay fikiraan. Gaar ahaan wax kasta oo ka mid ah kadib maareynta maareynta. Thomson Reuters iyo Job Pro waxay ku shaqaaleeyaan xirfadlayaal khibrad leh ilaa kor u qaado resumeygaaga.
Luqadda Ingiriiska ee Imaaraadka Carabta
Falanqeynta ka socota 85% dadka reer Dubai ee aad ka heli karto dalxiisayaasha ku hadla afka Filibiin. Sidoo kale Hindi iyo Urdu iyo Bengali. Waxaa intaa sii dheer Tamil, Tagalog, Faaris, Shiinaha, Malayalam, marka lagu daro luqado kale oo badan. In kasta oo Carabi tahay luuqadda rasmiga ah ee UAE, Ingiriisigu waa luuqadda ugu hadalka badan ee laga isticmaalo Dubai. Marka, shaqooyinka Dubai waxaa loo samayn karaa xarun call-celinta oo ka shaqeysa UAE.
Waxaa jira noocyada 4 ee Carabiga lagu hadlo Dubai. Waxay yihiin Maghrebi Carabi, Carabi Carabi, Gulf Carabi iyo Levantine Carabi. Si kastaba ha ahaatee, luqada ugu caansan ee laga hadlo Dubai waa Carabi iyo Ingiriisi. Marka la eego qodobbadaas, waxaa fahamsan dhammaan dadka ku hadla carabiga waxaa ku jira "Modern Standard Arabic". Dhameystiran hagaha si aad ugu soo guurto Dubai waa adiga?.
Haddii aad rabto inaad ku hadashid Carabi ama Ingiriisi, waa ammaan inaad sheegto kuwaas oo la hadlaya nolosha iyo hadda shaqeeya ee Emirates. Ama xataa booqo Dubai oo qorsheyneysa in ay kudhashoy sababta oo ah waxaad tahay raadinaya Dubai Shaqooyinka. Dhinaca kale, haddii aad ku hadashid Ingiriisiga. lama kulmi doono wax dhibaato ah oo lala xiriiri karo dadka maxalliga ah ama midba midka kale.
Dalka Isutagga Imaaraatka carabta, sidoo kale waxaa jira kuwo aad u tiro badan ganacsi anshax aad u baahan tahay in la raaco dalxiis ahaan dalxiis. Sida xaqiiqda ah, waxaad u baahan doontaa inaad baratid ganacsiga Ingiriisiga. Gaar ahaan haddii aad rabto inaad bilowdo inaad ka shaqeyso heerka maamulka. By habka, ma aha kaliya Dubai ama Abu Dhabi. Waxaad u baahan tahay inaad leedahay khibrad ballaadhan haddii aad jeclaan lahayd inaad ka shaqeyso dibadda Dubai gaar ahaan ganacsiga.
Xaaladaha cimilada ee Dubai
Ka hor intaadan u guurin Dubai, dadka ajnebiga ah waa inay ogaadaan in magaalada ay tahay mid kulul. Waqtiga oo dhan bisha August waa ugu kulul bishiiba magaalada Dubai oo leh celcelis heerkulka 36 ° C (96 ° F). Halka bisha Janaayo la aqoonsan yahay bisha ugu qabow ee sanadka oo leh heerkulaad gaaraysa 19 ° C (66 ° F). Way ku adag tahay inaad ku raaxaysatid socodka beerta ama ku foogan koob koob oo kafee ah. Si aad uhesho hab kale, dhismaha banaanka waa hawada kulul. Waa kuwee? waxay ku adkeyneysaa dadka deggan inay ku raaxaystaan dibadda banaanka. Qalabka-qaboojiyayaashu waa meel walba waana sababtaas waxaan kugula talineynaa dhammaan xirfadlayaasha iyo dadka degan si ay u haystaan ​​jaakad iyaga u gaar ah maxaa yeelay waxay ku dhexjiraan gudaha qashinka qabow.
Xaaladda cimilada gaar ahaan Dubai iyo Abu Dhabi. Guud ahaan, sanadku waa maalin fasax ah. Qof kasta oo booqday UAE wuu ogyahay Dubai waa meel aad u fiican oo lagu noolaado. Cimiladu waxay ku fiican tahay dabaasha iyo dukaameysiga. Waxyaabo kale oo cajiib ah ayaad ka heli kartaa caasimadda Imaaraadka Carabta. Goobta Skydiving ee Abu Dhabi ama Bilayska gawaarida waawayn ee ciyaaraha ee Dubai. Waa wax cajiib ah qof kasta oo jecel inuu isku dayo. Waxaan aad u sarreeyaa waxaa lagula taliyay in dadka cusubi ay isku dayaan. Gaar ahaan xilliga jimicsiga, Emirates waa fasax uun aan dhammaad lahayn marka loo eego samada qoraxda.
In kasta oo aad booqanayso Dubay ganacsi ama raaxaysi, qof kastaa wuxuu jecel yahay inuu dhadhamiyo waxa loogu yeedho "Aqoonta Dubai". Si aad u ogaato Sidee ayay ku dhacday Dubai eegid iyo ku biir WhatsApp Kooxda Shaqooyinka.
Isticmaalka khamriga ee Emirates
Dad badan ayaa leh aragti ah in khamriga si xor ah loo qaybiyo emirate of Dubai. Laakiin xaqiiqadu waxa weeye, in khamriga lagu cabbo dadweynaha waa mamnuuc in ciqaab la gaari karo xabsiga. Marka la eego qodobadaas aalkolada ee emirate ee Dubai waxaa kaliya loo oggol yahay hudheelada, baararka iyo makhaayado gaar ah iyo goobaha kaliyaha.
Dubai City waa, dabcan, diinta Islaamka, sidaa daraadeed aalkolka lama ogola wax badan. Xitaa inta aad joogtid raadinta shaqo ee Emirates. Waxaad naftaada u dhiiri gelin kartaa inta badan dadka shaqo doonka ah ee ka shaqeeya dalalka kale. Kaliya tag baako oo cabi cabitaan. Waxaa jira xayiraadyo kale oo badan oo ka jira Imaaraadka Carabta inaad ubaahantahay inaad ka warhesho sidii aad u bilaabi lahayd. Laakiin dhinaca kale, waad awoodaa google waa. Haddiise aad dhibaato gasho waxaad had iyo jeer lahadli kartaa booliiska. Dhanka togan, waa inay fiicnaataa haddii aad socdaaleysid oo kaliya booqanaya Dubai.
Tilmaam dhammaystiran oo loogu talagalay inaad u soo guurto Dubai waa adiga? Ma hubtaa inaadan isticmaalin aalkolo? Miyaad diyaar u tahay Dubai?.
Gaadiidka Degmada iyo Dubai City
Guud ahaan, metro Dubai ayaa inta badan lagu rakibaa rakaabka inta lagu jiro saacadaha degdegga ah ee ka yimid 7 ilaa 10 am iyo 4.30pm ilaa 8 wakhti dambe ama ka dib. Markaad safar gasho, waqtiga ugu fiican si aad u hesho meel kasta oo dhakhso ah waa habeenkii oo aanay wadooyinka mashquul ahayn. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad ogaataa in socdaalka baabuurta, baska ama taksiyada; waqtiyada marka wadooyinka badanaa la xirxiro waa Jimcaha Jimcaha iyo Sabtida gaar ahaan agagaarka dukaamada, dalxiisyada dalxiiska, iyo xeebta iyo suuqyada maaliyadeed. Iyo sidoo kale haddii aad tahay iyagoo doonaya in ay noqdaan haweenay u dhalatay Dubai. Waxaad u baahan tahay inaad ogaato xeerarka qaarkood ee kugula kulmi kara.
Qodob kale oo ka mid ah gaadiidka degaanka ee Dubai waa taraamka lagu bilaabay 2014. Iyada oo qayb ka ah nidaamka gaadiidka dadweynaha ee Dubai oo isku dhafan. Tareenka Dubai wuxuu siinayaa rakaab si fudud oo loo heli karo dhammaan meelaha muhiimka ah ee magaalada. Kuwaas oo kale Jumeirah Beach Residence, Dubai Marina, ganacsiga goobaha iyo waddada Al Sufouh. Waxaa xusid mudan in sidoo kale Dubai Tram ay sidoo kale la xiriirto saldhiga metro. Dhinaca wanaagsan, waxaad kala hadli kartaa dhowr wadan oo kale. Taasi dhab ahaantii waxay sidoo kale booqaneysaa UAE. Tusaale ahaan, marka laga reebo Hindida, waxbadan baa jira Koonfur Afrika oo ku taal Dubai. Waxaad si sahal ah ula hadli kartaa qof kasta oo jooga Imaaraadka Carabta ee Ingiriiska.
Waxaa jira Dubai Ferry iyo sidoo kale gaadiidka dalxiiska. Waxay u ogolaataa dadka booqanaya si ay u arkaan magaalada oo ka soo jeeda badda iyo hareeraha quruxda quruxda badan iyo dhismayaasha asturnaanta. Wax badan ayaa jira ganacsiga suuqyada ee Dubai oo ay sameeyeen Dowladda Imaaraadka. Dabcan si kor loogu qaado magaaladan cajiibka ah. Ujeedada ah in la keeno dad badan oo booqanaya Abu Dhabi iyo Dubai.
Sidee shaqo looga heli karaa Dubai si shisheeye ah?
In la illoobo Dubai oo ah dal cusub. Dhab ahaan, shaqaale cusub waxay u baahan yihiin inay si adag u shaqeeyaan maalin kasta. Just si aad u hesho si aad u hesho dalab shaqo. Dhinaca dhinaca wanaagsan, waxaa jira dhawr qorid adeegyada aad u isticmaali kartid inaad hesho shaqooyinka Dubai. Xaqiiqdii maahan kibis fudud shaqo hel gudaha Dubai. Dad aad u badan ayaa ku dhex jira gudaha UAE. Ayaa jeclaan lahaa inuu helo fursado shaqo oo weyn leh shirkadaha Dubai City? Sababtan awgeed Shaqada dibada ee Dubai waa mid caan ah.
Qaab kale oo caan ah oo lagu helo shaqo ku jirta UAE. Ma tahay inaad tagto magaalada, iyo raadinta waraysiyada socodka ee Dubai. Macaamiishayadu waxay kugula talinayaan wejiga si aad ula hadasho maamulayaasha shaqaalaynta. Sababtoo ah haddii aad awoodi kartid inaad iska iibiso maamulayaasha shaqaaleynta. Xaaladaha badankood, adiga waxay ku guuleysan doonaan dagaalyahannada qorista.
Kooxda WhatsApp ee Dubai
WhatsApp Kooxda qoritaanka ayaa si dhakhso leh u koraya maalin kasta. Shaqooyinka Dubai ee ka dhalan kara sii kordhaya telefoonka gacanta shaqaalaysiinta iyada oo laga caawinayo shaqo doonka 50,000 ee UAE. Kooxdayadu waxay abuureen a shaqo raadin kooxaha ku sugan Dubai. Iyadoo fiirogaar ah la siinayo shaqaale doonaya kuwaas oo doonaya in ay u shaqeeyaan dibedda Dubai. Gaar ahaan haddii ay doonayaan inay noqdaan ayaa si deg deg ah uga dhoofay Imaaraadka Carabta. Marka sidaad u aqrisay hageheena Dubai. Waa inaad hada isku dayaan inaad hesho a shaqo riyadeed. Magaalada Dubai waa meelaha ugu fiican ee lagu noolaado. Marka maxaad u tijaabin weyday oo aad u diri weyday arjiga shaqada. Shirkadda Dubai City kooxda qorista. Ma marwalba caawinta dadka ajnabiga ah. Dhinaca kale, waa inaad sidoo kale fiirisaa shirkadaha shaqaaleynta. Careerjet iyo Monster Gulf. Runtii aad ayay muhiim u tahay inaad codsato CV-gaaga.
Tilmaam dhammaystiran oo loogu talagalay u soo guurista Dubai waa u fiican WhatsApp?
WhatsApp waa in lagu qoro UAE
Tani waa hagid dhamaystiran oo loogu talagalay inaad u soo guurto Dubai.
Imaaraadka Imaaraadka Carabta. Waxaad awoodi kartaa Kooxo shaqo ayaa sidoo kale laga helaa Yurub oo ku yaala Poland. Kulamo gaar ah oo loogu talagalay qurba-joogta cusub ee UAE. Xitaa waxaad ka heli kartaa kooxo yar oo gaar ah. Halka aad ka heli karto talo ku saabsan habka shaqaalaynta caasimadda Imaaraadka Carabta. Dhinaca dhinaca wanaagsan, mid ka mid ah hababka caqligu waa adeegga qorista taleefannada gacanta ee loogu talagalay dadka shaqo doonka ah ee Dubai.
Hag dhammaystiran oo lagu helo shirkad shaqaaleysiin wanaagsan oo ku taal Dubai. Tani waa hab haddii aad rabto inaad shaqo ka bilowdo UAE. Kooxaha WhatsApp waa kuwa ugu wanaagsan ee shaqo looga helo UAE. Laakiin waad arki kartaa eegitaankeena Resume Resume oo ku socota Qaybta ugu Higeysa ee Qaybta Dunida. Tani waa hubaal dhammaystiran Tilmaan si aad ugu soo guurto Dubai.
Sida loo helo loo-shaqeeyaha ugu fiican ee Emirates
Waxaa sidoo kale jira siyaabo dhowr ah oo loo helo shaqo ku jirta UAE. Laakiin ay weheliso Hindida Hindiya. Waxa kale oo jira dalal kale oo shaqo ka raadinaya Imaaraadku. Tusaale ahaan, Pakistani oo shaqo raadinaysa Dubai. Ma awoodaan inay helaan shaqo iyada oo adeegsanaya adeegyadayada gudaha UAE. Raadinta loo-shaqeeyayaasha ee Imaaraadka Carabta. Noqo hawl adag gaar ahaan kahor soo saar 2020.
Kooxdayada gaar ahaan la shaqeynta dadka ajnabiga ah. Mashaariicda Expo oo ah 2020, waa inaad u dhaqso badan si aad shaqo u hesho.
Shirkadda Dubai City waxay leedahay shaqooyinka laga heli karo Dubai iyo Abu Dhabi halkaas oo aad u diri kartaa CV. Hubi inaad u soo diri doonto faahfaahintaada cusub ee shirkadeena. Intaa waxaa dheer, Dubai ayaa si rasmi ah u noqota meel aad u booqatay Bariga Dhexe oo dhan.